महेन्द्रसिंह धोनीले संन्यास लिदैं ! – Everest Dainik – News from Nepal
महेन्द्रसिंह धोनीले संन्यास लिदैं !
नयाँदिल्ली, साउन २ । इंग्ल्याण्डसँग तेस्रो वानडे म्याच सकिएपछि मंगलबार भारतीय टीम ड्रेसिंङ रूमतर्फ फर्किए रहेको थियो । त्यति नै बेला महेन्द्रसिंह धोनीले अम्पायरसँग बल लिएर गए । यसपछि धोनीले खेल जीवनबाट संन्यास लिन अनुमान गरिन थालिएको छ ।
यसअघि पनि धोनीले टेस्ट खेलबाट संन्यास लिने बेलामा यस्तै गरेका थिए । सन २०१४ मा अस्ट्रेलियाविरुद्धको अन्तिम टेस्ट म्याच बराबरीमा सकिएपछि धोनीले स्टम्प आफूसँग लिएर गएका थिए । सामान्यतयः जित्ने टोलीका खेलाडीले स्टम्प लिने चलन छ ।
भारत इंग्ल्याण्डसँग सीरीज २–१ ले पराजित भएको छ । अन्तिम खेलमा इंग्ल्याण्डले भारतलाई आठ विकेटले पराजित गरेको हो । लीड्समा व्याटिङ सकिएपछि मैदानमा धोनीले अम्पायरसँग जब बल लिएपछि उनका शुभचिन्तकलाई तनाब भएको छ । एक पटक त उनीहरुलाई धोनीले तत्कालै संन्यासको घोषणा गर्छनकी भन्ने लागेको थियो । यति बेला यसबारेमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ ।
इंग्ल्इाण्डको वान डे सीरिजमा धोनीको प्रदर्शन त्यति राम्रो भएन । उनको प्रदर्शनलाई लिएर केहीले त उनलाई संन्यासको सल्लाह पनि दिएका छन् । धोनीले लडर््समा भएको वान डे सीरीजको दोस्रो खेलमा ५८ बलमा ३७ रन बनाएका थिए । उनको यो सुस्त पारीमा प्रति दर्शकले उनलाई उडाएका थिए । तेस्रो खेलमा पनि उनी खासै जम्न सकेनन् । उनले ६६ बलमा ४२ रन बनाए भने केही डट बल खेलका थिए ।
ट्याग्स: Ms dhoni, Retirement